Malunga nathi -HEBEI FIZA TECHNOLOGY CO., LTD
Wamkelekile kwi-FIZA TECHNOLOGY
Inkampani yethu yasekwa ngo-2005 kwaye kwikomkhulu ibekwe e shijiazhuang leyo imbonakalo entle China. Elona shishini liphambili libandakanya ukuveliswa kunye nokuthengiswa kwemichiza yezemigodi kunye nokuvavanywa komlilo ngezinto ezisetyenziswayo, kunye nokuthumela kwelinye ilizwe itekhnoloji ye-chlorine dioxide. Inkampani yethu, ejolise ekusebenzeni ngokuzinzileyo kunye nophuhliso oluzinzileyo, ihlala inyanzelisa ukholo olujolise ekwakheni uphawu lwenkampani elungileyo kunye nokuphumelela imarike kunye nabathengi abanomgangatho olungileyo wemveliso kunye nenkonzo engafakwanga. Inkampani yethu ifumene amabhaso amaninzi anje nge "shijiazhuang yeshishini elithembekileyo", "iBakala A lemveliso ekhuselekileyo kunye neshishini elithembekileyo" kunye "nemodeli yeshishini lolwakhiwo lwenkcubeko yokhuseleko". Ngoku inkampani yethu ikhule iyinkampani ekhokelayo kolu shishino kwaye yafumana indumiso ebanzi nokuqondwa.
Inkampani yethu inamasebe amaninzi kunye neziseko zemveliso kwilizwe liphela, ezineendlela zemveliso eziqolileyo zeekhemikhali eziphilayo kunye namaqela aphezulu kwimveliso yenkampani yethu.Ikwasebenza kwimizi-mveliso yemichiza iminyaka emininzi, kwaye umthamo wokuthumela kwelinye ilizwe uhlala uhlala uphambili kolu shishino. Ngoku inkampani iphumelele ukusebenza kweshishini kwaye iphumelele ishishini eliphezulu.
Ngexesha lokwandiswa kweshishini, inkampani yethu igcina utshintshiselwano kunye nentsebenziswano nentabalala yabenzi ekhaya nakumazwe aphesheya, kwaye iphuhlise ubudlelwane obuhle nenani elikhulu leenkampani ezidwelisiweyo kunye namashishini ezizwe ngezizwe e-Southeast Asia, Europe, Australia, Middle East nakwamanye amazwe nakwimimandla yaphesheya .
Ukusekwa kule minyaka idlulileyo, inkampani yethu yafumana abathengi abaninzi abazinzileyo ekhaya nakumazwe aphesheya, kwaye yafumana ingxelo ethembekileyo kubo bonke abasebenzisi beenkqubo zemveliso ezihambele phambili, umgangatho ophezulu weemveliso kunye nenkonzo ebalaseleyo emva. Ngokuqhubeka okuqhubekayo kwegama, kunye nophuculo oluqhubekayo lobuchule bemveliso kunye nolawulo, umthamo wentengiso yenkampani yethu uyaqhubeka ukwanda.
Shijiazhuang lweshishini oluthembekileyo
IBakala A kwimveliso ekhuselekileyo kunye neshishini elithembekileyo
Umzekelo weshishini lokwakha inkcubeko
Ukulungele ukufumana okungakumbi ngathi?
Injongo yethu "kukufumana ukuthembela kwakho nenkxaso ngenkonzo yethu enyanisekileyo kunye neemveliso ezisemgangathweni; zincedane kwaye sifikelele kwimeko yokuphumelela." Inkampani yethu izimisele ukusebenzisana ngokunyanisekileyo nazo zonke iinkalo zobomi ekhaya nakumazwe aphesheya ukwenza ikamva eliqaqambileyo!